Fanarenana tsy hay tohaina no ilaina… | NewsMada
Fanarenana tsy hay tohaina no ilaina…
Par Taratra sur 16/09/2019
Arahaba soa, arahaba tsara. Ho raikitra ihany ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna ny 27 novambra; eny, misy aza ny kaominina tsy manana mpirotsa-kofidina ka tsy hisy fandatsaham-bato: hanao fifidianana ampahany.
Maika ny raharaha, tsy azo ifampiandrasana intsony ny fampandrosoana. Izay tsy vita tao anatin’izay fe-potoam-piasana efa-taona izay, aleo hataon’ny hafa. Raha tsy izany, hotohizan’ny tena raha mbola misy ny fahatokisan’ny vahoaka. Ady fiady izay.
Inona moa ny mahamaika amin’izao? Akaiky ny vahoaka indrindra ny fifidianana kaominaly, ary miantoka sy itafarana mivantana ny fampandrosoana ifotony. Tsy azo tamoraina na toy inona fiheverana sy tombantombana toy ny fahavitsian’ny kandidà, ohatra.
Amin’ny toy izao, saika mampitsanga-mitoetra mandrakariva ny fifidianana ho ben’ny Tanàna eto Antananarivo Renivohitra. Tsy noho ny maha Renivohitr’i Madagasikara azy ihany fa eo indrindra ny hoe lasan’ny mpanohitra mandrakariva hatramin’izay.
Nampandroso ve izay? Saika fifanenjanana sy fifananjehana politika no betsaka fa hoe saika miainga sy mifarana eto Antananarivo Renivohitra hatrany ny fiovan’ny fitondram-panjakana. Hanao ahoana amin’izao fifidianana izao amin’ity hoe fiovana sy fanovana?
Tsy mba tokony hiainga eto Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara amin’izay koa ve ny tena fiovana sy ny fanovana indray amin’ny fampandrosoana? Havela ny adilahy politika, ny fiadiana sy ny fitadiavana tombontsoa manokana, ny fanamparam-pahefana…
Tsy efa ampy ve izay? Tsy nahitam-bokatra izay ela izay fa zava-doza aza: fahalotoana, tsy fandriampahalemana, korontana sy gaboraraka… Mila olom-baovao tsy mpanao politika politisianina izay, tena hanarina sy hampandroso ny tanàna sy ny vahoakany.
Olona vonona izany, sahy, manam-pahendrena… Fanarenana tsy hay tohaina no ilaina: haingana, mahery vaika, mipaka mivantana any ifotony. Miainga amin’ny vina sy ny fandaharanasa mazava azo tanterahina… iombonana sy mampiombona.